अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयहरूमा कसरी आवेदन दिने ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ३० कार्तिक २०७३, मंगलवार ०६:४८ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियामा ४० भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरु छन्। थुप्रै विद्यार्थीहरू विदेशी विश्वविद्यालयमा आवेदन प्रकिया जटिल मान्दछन् र त्यसैले एजेन्ट मार्फत आवेदन दिन्छन् । यदि तपाईं आफैले विश्वविद्यालयहरु आवेदन प्रक्रिया गर्नु भयो भने, यो प्रक्रिया सरल र स्पष्ट पाउनुहुनेछ।
विश्वविद्यालयहरूमा कसरी आवेदन दिने ?
–अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दा तपाईं कुन शहर वा क्षेत्रमा बस्न रुचाउनु हुन्छ भन्ने अनुसन्धान गर्नुहोस् ।
–कुन विश्वविद्यालयहरु नजिकै छ वा आफ्नो रुचिको शहर नजिकै छ भन्ने अनुसन्धान गर्नुहोस् ।
–तपाईंले पूरा गर्न चाहेको पाठ्यक्रम र क्लास प्रदान गर्ने निश्चित गर्न तपाईले विचार गर्नु भएको प्रत्येक विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट पढ्नुहोस्।
–प्रत्येक विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा, क्याम्पस आकार,शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम काम, छात्रवृत्ति, स्थान र यातायातका विकल्पहरू तुलना गर्नुहोस्।
दुई वा तीन ओटा आफुलाई मन परेको विश्वविद्यालयहरुको आधिकारिक वेबसाइटहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि आवेदन र भर्ना प्रक्रियाको बारेमा हेर्नुहोस्।
–विश्वविद्यालयहरुमा आवेदन दिनु अगाडि सबै प्रवेश आवश्यकताहरु र अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरु पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
–सबै आवश्यक दस्तावेज, जस्तै आवेदन फारम, परिणाम ट्रान्सक्रिप्टहरु , पुरस्कार प्रमाणपत्रहरु , अंग्रेजी भाषामाँ दख्खल भएको प्रवीणता र आफ्नो पहिचान को प्रमाण संकलन गर्नुहोस् । अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयहरुमा आवेदन गर्दा सबै दस्तावेज आधिकारिक रुपमा अंग्रेजीमा अनुवाद गर्नुपर्छ।
–आफ्नो दस्तावेज बुझाउनुस् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अनलाइन मार्फ़त विश्वविद्यालयहरुमा आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ, सीधै विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पठाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा विश्वविद्यालयको अधिकारी विदेशी एजेन्ट मार्फत पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ ।
–प्रत्येक विश्वविद्यालयको आधिकारिक वेबसाइट ध्यानपुर्बक पढ्नुहोस् र सही ठाउँमा आफ्नो आवेदन बुझाएको कुरामा पक्का हुनुहोस् ।
विश्वविद्यालयले आफ्नो आवेदन प्राप्त गरेको र आफ्नो प्रस्ताव स्वीकारेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन आफ्नो इमेल वा मेलबक्स नियमित जाँच गर्नुहोस् ।
तपाईंले आवेदन गरिसकेपछि…
तपाईंले सबै कोर्स आवश्यकताहरु पूरा गर्नु भएको छ भने विश्वविद्यालय वा तपाईको आधिकारिक एजेन्टले एक हप्ता वा एक महिना भित्र तपाईलाई एउटा प्राप्त भएको सुचना दिने मेल पठाउने छन । तपाईलाई निसर्त प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ जस्लाई प्रशोधन गरे पछि तपाईं आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ । यदि त्येहा कुनै पनि उल्लेखनीय अवस्था छ भने, त्यसपछि तपाईंलाई एक सशर्त प्रस्ताव पठाइने छ ।
प्रस्ताव स्वीकार गर्न तपाईंलाई आवश्यक पर्ने छ :
–प्रत्येक पाठ्यक्रम र विश्वविद्यालय सँगै अलग अलग हुन सक्ने कुनै पनि उल्लेखनीय अवस्था लाई पूरा गर्नुपर्छ ।
प्रस्ताव स्वीकृति फारम पूरा गर्नुपर्छ ।
–अष्ट्रेलिया बस्दा लाग्ने संपूर्ण खर्चको लागि तपाईं संग पर्याप्त धनको पहुँच छ भनेर प्रमाणित गर्न विद्यार्थी वित्तीय घोषणा फारम पूरा गर्नुपर्छ र
आफ्नो प्रस्ताव पत्रमा उल्लेखित पैसा तिर्नुपर्छ ।
–केही विश्वविद्यालयलाई प्रवासी विद्यार्थी स्वास्थ्य कवर (OSHC) को लागि भुक्तानी पनि आवश्यक हुन सक्छ।
–तपाईंले आफ्नो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेपछि तपाईलाई भर्नाको एक पुष्टि (COE) पठाइने छ। तपाई संग पुष्टि भइसकेपछि आफ्नो भिषा को लागि आवेदन गर्न आवश्यक हुनेछ। यदि तुरुन्तै प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने चयन गर्ने हो भने तपाईं आफ्नो भर्ना को प्रस्ताव स्थगित वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ ।
विश्वविद्यालयमा आवेदनको लागि सुझावहरु
–सकेसम्म चाडो आवेदन तयार गर्नुहोस् र आफ्नो कार्यक्रमको भर्ना मिति जांच गर्नुहोस् । कार्यक्रम प्रारम्भ मिति भन्दा तीन चार महिना पहिले नै विश्वविद्यालयहरुमा आवेदन दिन विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ ।
–तपाईंलाई आवेदन गर्दा कुनै पनि मदत चाहिएमा विश्वविद्यालयको प्रवेश कार्यालयमा सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
–यदि तपाईं आफैलाई आवेदन दिन गारो महशुश भएमा तपाईंको आफ्नो देशको विश्वविद्यालय एजेन्टलाई आवेदनको लागि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस कि केही एजेन्टहरुले यी सेवाहरू लागि शुल्क लीन सक्छन् ।
–हरेक विश्वविद्यालयमा आफ्नो विद्यार्थीहरूको लागि विभिन्न पाठ्यक्रम आवश्यकताहरु हुन्छन् , त्यसैले तपाईं विश्वविद्यालयमा आवेदन दिनु भन्दा पहिले आफुले सबै आवश्यकताहरु पढेको पक्का गर्नुहोस् ।
–विश्वविद्यालयहरुको आवेदन सफलतापूर्वक सकेपछि अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दा कुन कुराहरु विचार गर्नु पर्छ भनेर सोच्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंले प्रत्येक विश्वविद्यालयको प्रबेश आवश्यकताहरुको लागि निर्देशनहरु पालन गर्नु भयो भने तपाईंले अष्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयहरुको आबेदन प्रक्रिया सजिलो पाउनुहुन्छ ।
Source : Study my way
Previousसनी लियोनी आफ्नो बयोग्राफी डकुमेन्ट्रीबाट असन्तुष्ट (ट्रेलर सहित)
Nextअष्ट्रेलियामा हुने नेपाल फेष्टिबलमा विदेशीलाई आकर्षित गर्न #tagAmate (‘ट्याग अ मेट’) अभियान
सेटलमेन्ट परामर्श : अष्ट्रेलियामा कानून उल्लंघनको जरिवानाबाट कसरी राहत पाउने ?
९ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०६:१५
अष्ट्रेलियामा कसरि कम शुल्कमा पढ्न सकिन्छ ? यी हुन् केहि उपाय
२० चैत्र २०७४, मंगलवार ०४:४९
अष्ट्रेलियामा नेपालीपन जोगाउँदै: सोलाङ्चर
१३ मंसिर २०७१, शनिबार ०६:०३